Gawaarida Gawaarida, Gawaarida Flywheel, Gawaarida Gawaarida - SAMUEL
Gawaarida gawaarida inbadan >>
Waxay ku habboon tahay gawaarida, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, koronto-dhaliye, tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaan sare, jilicsanaan, dhalaal iyo adkeysi kadib dhammaadka. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
Gawaarida duulista inbadan >>
Madaxa dhululubo otomaatiga ah inbadan >>
Crankshaft baabuur oo tayo sare leh ayaa ku habboon Ren ...
Nooc dhamaystiran oo ah gawaarida gawaarida gawaarida ...
Shijiazhuang Samuel Auto Parts Co., Ltd. waa soo saare xirfadle ah oo ka kooban baabuurta. Sannadihii wax soo saarka iyo howlgalka, waxay sameysay xariiq wax soo saar iyo wax soo saar leh teknolojiyad heer sare ah, qalab wax soo saar horumarsan, hababka imtixaanka heerka koowaad iyo maareynta tayada adag. Shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah ee ISO9001 2000, tayada ayaa gaadhaysa heerarka farsamo ee mashiinka gubashada gudaha ee crankshaft JB / T6727-1999, JB / T51049-1999.